New Media…New Tech | သင်ကာဘုန်းမြင့်-Thinker Bhone Myint
← ဖွဲ့တည်ရာ အတွဲ(၁)၊ အမှတ်(၆) တစ်နှစ်ပြည့်
မရကျစကျသငျ့တဲ့ ရကျစကျမှုမြိုးနဲ့ →
February 19, 2009 · 2:04 am
New Media…New Tech
(This article was published recently in True News Journal, Vol.?, No.?. Later – when I get access wireless Internet with my laptop – I will post in full text of this article in Unicode system. )
2 responses to “New Media…New Tech”
မီဒီယာထဲ ဘလော့ဂ်ပါ ပါလာပြီလား။
သြော်…ဒါနဲ့ စကားမစပ်… ရှင့်ကို မုန်းလိုက်တာ။
ကိုသင်ကာလည်း အလုပ်ရှုပ်နေတယ် ထင်ပါ့ဗျာ.
အားလုံးအဆင်ပြေ အောင်မြင်ပါစေဗျို့.. 🙂